Zụta ndị na-eso ụzọ TikTok - AudienceGain Ltd.
Zụta Real ndị debanyere aha YouTube
Zụta Ezigbo Echiche YouTube
Zụta Akaụntụ TikTok
Agụmakwụkwọ Na-adịghị N'ịntanetị
Kedụ uru m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m azụta ndị na-eso ụzọ TikTok?
Ndị na-eso ụzọ bụ akụkọ sitere n'aka ndị ezigbo mmadụ na netwọkụ anyị.
Na-enye akaụntụ gị ntụkwasị obi maka uto ahịhịa.
Na-agba ndị ọzọ ume isonyere ndị na-eso ụzọ gị.
Akụkụ ntanye nri dị maka uto okike.
Ọ pụrụ inupụ gị videos na "malitere ịrịa" mmetụta.
100% iwu kwadoro ma na-agbaso usoro iwu TikTok.
Nsonaazụ na-aga n’ihu kwa ụbọchị ruo mgbe ihe karịrị 100% zuru ezu.
Dịka ọ dị na ọrụ ndị ọzọ, anyị na-akwalite vidiyo gị na Social Media, dịka otu Tiktok na Facebook, Reddit. N'ụzọ dị otú a, ị ga-enweta Na-eso ụzọ si ezigbo ndị mmadụ ndị na-ele ma na-emekọ ihe na vidiyo gị.
Ọ dị mma ịzụta ndị na-eso ụzọ TikTok?
Obi siri anyị ike ịsị na ọrụ ahụ zuru oke, mkpọsa nkwalite bụ iwu ma na-agbaso usoro iwu TikTok.
Ndị na-eso ụzọ dị adị na site na usoro nkwalite na Social Media.
Kwuo NO inye ọrụ dị ọnụ ala na n'ezie, akaụntụ gị ga-ekwe nkwa nchebe maka ndụ.
Kedu ihe kpatara Tiktoker ji azụrụ ndị na-eso ụzọ?
Zụta ndị na-eso ụzọ TikTok ga-enyere gị aka ịkụ algorithm TikTok mgbe emechara ya n'ụzọ ziri ezi, ebe ọ bụ na post gị ga-adị ka ọ na-ewu ewu karịa na TikTok ga-eso ndị na-ege ntị kerịta ọdịnaya gị. O doro anya, ọ bụrụ na ị nwere nnukwu akaụntụ na nnukwu ndị na-ege ntị, ị ga-enwe njedebe karịa akaụntụ ọzọ nwere obere ndị na-eso ụzọ.
Site n'inwe ezigbo ndị na-eso ụzọ, ị ga-agba ndị ọrụ ume ịgbakwunye akaụntụ gị. N'ụzọ dị otú a, ịnwere ike iji ike nke ọnụ ọgụgụ ma nweta leverage. Ọ na - enyere aka ịbawanye njikọ na ịkwanye vidiyo na nsonaazụ “nje” nke mere na ihe kpatara TikTokers ji azụrụ ndị na-eso ụzọ maka akaụntụ ọhụrụ ha.
Enwere m ike ịnweta ego na TikTok?
Ka ọ na-erule ngwụsị nke 2020, TikTok wepụrụ ego TikTok Onye Okike nwere ego $ 200 iji gbaa ndị okike gosipụtarala na ha nwere ike ịme ọdịnaya a ma ama. Iji ruo eruo itinye akwụkwọ maka ego ahụ, ị ​​ga-adịkarịa ala 18 afọ, nwee opekata mpe ndị na-eso ụzọ 10,000, nwee opekata mpe echiche 10,000 n'ime ụbọchị 30 gara aga, ma biputere "ọdịnaya izizi" nke na-agbaso TikTok's Community Guidelines.
Agbanyeghị, etinyere ego TikTok Onye Okike etinyerela TikTokers niile n'ụwa niile. Ọ dị ugbu a na ụfọdụ mba Europe dịka US, UK, Germany, Italy, France na Spain. TikTok kwere nkwa na ọ gaghị akwụsị ebe a, mana nke a bụ ohere zuru oke maka ndị na-emepụta ọdịnaya n'ụwa niile nwere ike ịkpata ego na vidiyo ha n'oge na-adịghị anya. Yabụ, na-eme vidiyo dị egwu, a ga-akwụghachi mbọ maka mbọ gị!